Buluugleey Information Service
Boqor Buurmadoow oo cambaareeyay Garaad Saleebaan
Buluugleey July 4, 2005
Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buur-madow), oo ka mid ah madax-dhaqameedyada ugu magacdheer gobolka waqooyi galbeed ayaa si ba’an u cambaareeyey Garaad Saleebaan Garaad Maxamed. Wuxuuna ku tilmaamay in Garaad Saleebaan yahay nin ka soo horjeeda nabada ku wada noolaashaha, ahna colaad-ooge aan garanayn milgaha xilkasnimo ee uu xambaarsan yahay.
Warkaan oo aan ka soo xiganay wargeyska Jamhuuriya ayaa sheegaya in cambaaraynta Boqor Cismaan ay ka dhalatay markii la sheegay in uu Garaad Saleebaan ku gacan-sayray ajande ku saabsanaa mowqifka Isimmada Beesha Sool ay la tagi lahaayeen kulan shalay loo ballansanaa in uu ka furmo degmada Yagoori ee Gobolka Sool. Waxay kulankaas ku kulmi lahaa ergo isugu jirta Suldaanno, aqoonyahano, iyo siyaasiyiin ka socda gobolka Waqooyi galbeed, kuwaas oo muddo laba toddobaad ah Degmada Yagoori u joogay sidii ay Isimmada Beesha Sool ula yeelan lahaayeen kulan loogu gogol-xaarayo shir-nabadeed xal loogu raadinayo colaada ka aloosan Gobolka Sool.
Baaqa Boqor Cisman uguma horeynin dhaqdhaqaayada nabad raadinta ee ku wajahan gobolkan oo in mudaba ay coaadu ka aloosneed. Waxaa horey isku dayay cilumaa’udiinka, waxgarad ka socda labada beelood ee ku dahaqan aaga ay colaadu ka jirto. Ilaa hadda wax natiija ah kama aynan gaarin Maamulada isku haya oo horeyna dagaalo ugu dhexmarey meelo ka tirsan gobolka Sool oo ay labada maamul sida aadka ah ugu muransanyihiin gacan ku hayntiisa.